Square tekinoroji ichangobva kudyarwa kupisa fekitori fekitori inouya kuzere kushanda-NEWS-Square Technology Group Co, Ltd.
Square michina's ichangobva invested kupisa exchanger fekitori kusvika kuzere kushanda
Square Technology yakadyara nyowani yekupedzisira / chubhu kupisa exchanger fekitori pakutanga kwe2018 uye fekitori inotanga kuendesa zvigadzirwa munaGumiguru 2019. Iyo fekitori inovhara nyika ye38000 sqm. Iyo inopisa exchanger portfolio ine mweya inotonhorera, evaporators, evaporative condensers, nezvimwe. Iwo mashopu akagadzirwa nehurongwa hwehunyanzvi michina, mazhinji acho anotengwa kubva kuEurope, kusanganisira otomatiki chubhu bender kubva kuItari, chubhu yekudzinga kubva kuItari, CNC muchina kubva kuGerman. , uye 4 seti yekumhanyisa kumhanyisa kumanikidza uye yekugadzira michina, nezvimwe.
Iyo yekupisa exchanger chigadzirwa mutsetse ichasanganisirwa muRekodhi tekinoroji inotonhora cheni chigadzirwa portfolio, uye inotibvumidza isu kuti tikwanise kuendesa yakakwana yechando yechikafu kugadzira uye logistic mhinduro.